ကံစမ်းမဲ တပုံတပင်ထဲ ပေါက်မဲမရှိတဲ့ ကံစမ်းမဲတွေ
ကံစမ်းမဲ တပုံတပင်ထဲ လူတိုင်းပေါက်တဲ့ ကံစမ်းမဲတွေ
ငါတို့ ပေါက်/မပေါက်တဲ့ ကံစမ်းမဲဟာ ငါတို့ ရှိနေတဲ့အရာဘဲ။
နေရပ် မှား/မှန် မပြောကြေး
အတွေးခေါ် မှား/မှန် ဖို့
၄၀ကျော်မှ ဘ၀ စမှာလား။
ငါတို့ တတွေလဲ ပြောင်းတယ် ဟောင်းတယ်။
အရိုးရင့် ကြီးမြင့်သူ သူငယ်ပြန်များထဲ
နေ့ဖို့ညစာ သမိုင်းကြောင်းမှာ။ ။
ပြီးခဲ့တဲ့.. လ က..သူငယ်ချင်း နေဆူးသစ် က..သူ့ ရဲ့ ၄၀ အတွက် ထင်ပါရဲ့..။ ၄၀ အတွေး တွေ ပွားပြီး…သူငယ်ချင်း တွေ ကြား.. အီးမေးလ် နဲ့ ..ကဗျာလေး တပုဒ် လွှင့် လိုက် တယ်။ အကြောင်း ကြောင်း ကြောင့်..အတော် နောက်ကျ ပြီးမှ ..ဖတ် လိုက် ရ တော့.. တခြား..တခြား သူငယ်ချင်း များ ရဲ့.. နောက် ထား.. ပြောင်ထား.. တာ တွေ နဲ့ .. စည်စည် ကားကား ဖြစ် ပြီး နေ ပြီ ။ ထုံးစံ အတိုင်း.. လက် က မနေ နိုင် တော့ .. သူတို့ ကြားထဲ.. ၀င် .. လေးဆယ် သံ ပြစ် ပြီး..နည်းနည်း ၀င်ရိ လိုက် မိ တယ်။ အမျိုးသား ကို.. ပြောပြ တော့.. ဘာတွေ လျှောက် ပြီး သွားပြော သလဲ.. နေရာတကာ..မပါချင်နဲ့.. လို့.. ဆူပါတယ်။
ဘယ်ရမလဲ.. အသာလေး ငြိမ်နေလိုက် ပြီး.. အခု..သူ့ ရဲ့..၄၀ ပြည့် မွေးနေ့ ကျ မှ.. ကိုယ် အငြိမ် မနေ ၀င် ပါ ထားတဲ့..ကဗျာလေး နဲ့ ပဲ.. အကုန်အကျ သက်သာ တဲ့..ပေးနေကျ.. မွေးနေ့ လက်ဆောင်လေး ပေးလိုက် တယ်..။
တကယ်ဆို..လေးဆယ် အတွေး ကို
တခြား လေးဆယ် တွေ နားလည်ဖို့ ..
စာလုံးရေ လေးဆယ် တောင် ရေးပြစရာ မလိုပါဘူး..
လေးလေးလံလံ နဲ့..လေးဆယ် မဆန်ကြပါနဲ့ လား
အစလည်း မဟုတ်..အဆုံးလည်း မနီး..
လေး လာလို့ ဆယ် ရ မဲ့... ဘ၀ အပိုင်းအခြားတခုလို့ သာ..မှတ်
လွတ်လမ်းကို တော့... မှန်းဖို့ မလို သေးဘူး ..
မလွတ်မလပ် လမ်းခုလတ် မှာသာ..
သားကျွေး.. မယားကျွေး ..ကားကြွေး.. တွေ မှန်ဖို့ လိုတာ..
တချို့.. စိတ်ကျ ဝေဒနာ
တချို့.. သက်လတ် ပြသာနာ
တချို့.. လောဘ ဒေသနာ
တချို့ ..သောက ရင်အနာ
ခေတ်ပေါ် ရောဂါ.. ပယောဂ တွေ မျိုးစုံ ကြား
လိုက်စား မူ တွေ လမ်းမစောင်း သမျှ..
ဘ၀ ကို အလောင်းအစား ထပ်စရာ မလိုဘူး..
လေးစား စရာ လူတွေထဲ မပါရင် ထား..
အသောက် အစား ဖက်
အထောက်အထား အမှားတွေ သာ မပြမိစေနဲ့
အနည်းဆုံး.. မင်းကိုယ်မင်း လေးစား နိုင် ပြီဆိုရင်ပဲ...
၂၅ . ဇူလိုင်. မှာ.. ၄၀ တင်းတင်း ပြည့်သွားတဲ့.. အရင်းဆုံး သူငယ်ချင်း ကြီး နဲ့ တကွ.. တခြားတခြား သော..လေးဆယ် သူငယ်ချင်းများ အတွက်...
ကိုယ် ကတော့..သူတို့ ထက် အများကြီး ငယ်ပါသေးတယ်..း)
Labels: friends , personal , poems
ကေရဲ့ ၄၀ ဆရာကြီး သားကျွေး.. မယားကျွေး ..ကားကြွေး တွေ မှန်ပါစေလို့....
ကေကလေးနဲ့ တူတူ လေးဆယ်တန်ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ အိုမင်းအောင် အပျင်းပေါင်းနိူင်ကြစေသော်ဝ်....:))
လေးဆယ် ပြည့်သူ မကေ အမျိုးသားအတွက် Happy Birthday ပါ။
Happy Birthday .to.
မကေ ရဲ့ လေးဆယ် ကဗျာလေး ကကောင်းလိုက်တာ
happy birthday ပါ မကေ ရဲ့ အရင်းဆုံး မိတ်ဆွေ ကြီးရေ
Please accept my belated birthday wish, bro! :)
အေးချမ်းပါစေ အစ်ကိုနဲ့အစ်မကေး)
Happy 40 yrs Birthday!
ဘ၀ကို သည်နေ့ကပဲ စကြပါလို့ ပြောရမလား...
လေးဆယ် မွေးနေ့ရှင် ပျော်ရွှင်ပါစေ...
အပျော်ရွှင်ဆုံးက မွေးနေ့ရှင်ကို အသက်ထက်ဆုံး အနောက်ကနေ နပမ်းလုံးထားသူ တယောက်ပဲ ဖြစ်မယ်...
Wish you both have wonderful accompanionship, friendship, whatever you both name it... :)
စိုးစိုးတယောက် ၄၀ ပြည့်လို့ သရိုးသရီ ဖြစ်နေတယ် ထင်ပါရဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘာမှ ပြောမနေတော့ဘူး၊ ဘုန်းကြီးသွားဝတ်ပစ်လိုက်တယ် :P
p.s. ဓါတ်ပုံလေးက အလန်းပဲအစ်မရယ်း))
နောက်ကျ ရောက်လာတယ်မကေရေ့ ..၊
လေးဆယ်တန် ကဗျာက အရေးအချယ်
လေးဆယ်မှ ဘဝ စ,တယ် ဆိုပေမယ့် 
လေးဆယ်ဆိုတဲ့အတွေးဝယ် ဘေးမဖယ်ပဲ
တွေးရမှာက “ နောင်အရေး ” ၊ “ သံသရာ”
အရေးပဲ မဟုတ်လား မကေ ...။
အင်း .. သိပ်မကျန်တော့ ဘူးနော...။
လေးဆယ်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားနိုင်ဖို့..
ကဗျာလေး နှစ်ပုဒ်လုံး ကြိုက်တယ်..
(၄၀ တန်းတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး :D)
လေးဆယ် ... လေးဆယ် ... ငယ်သေးတယ်။ ခုမှ ဘ၀စတာများ။ များတို့က ဘ၀စပြီးလို့ တစ်နှစ်ကျော်လေးရှိသေး။
Happy birthday to K's .
Happy Birthday ပါ မမကေရဲ့ အစ်ကိုကြီးအတွက်...
ကျွန်တော်တို့တွေးလေ မေးခွန်းတွေက ရှည်လျားလာလေ...:)
စိုးစိုး ၄၀ ခုမှ ပြည့်တာလား၊ မထင်ရဘူးနော်။ တို့က ၆၀ ထင်နေတာ..။
ကေ့ ကဗျာလေး မိုက်တယ်ကွာ။ ဓာတ်ပုံကလဲ ချစ်စရာ။
happy belated birthday greeting :)